Coral Reef: Black & White
ညိုလေးနေ said on September 14, 2013 at 7:44 AM
အဲ ... မှားလို့ ... သူ စာလုပ်နေတာ... စာလုပ်နေတာပါ :P
Happy Birthday to Loving Aunty !
ချစ်ကြည်အေး said on September 14, 2013 at 8:41 AM
အဖြူအမဲနဲ့ ပေမဲ့လည်း ချစ်စရာ မျက်လုံးဝိုင်းဝိုင်းလေးတွေနဲ့ ကလေးမလေးကို မှတ်မိနေပါတယ်း)
ဟန်ကြည် said on September 14, 2013 at 4:30 PM
ပြောကြစတမ်းဆိုရင် ရှေးတုန်းက အဖြူအမည်း ဓာတ်ပုံတွေက ဆေးသားအင်မတန်ခိုင်တာကလား...အဘိုးတို့ခေတ်က ဓာတ်ပုံတွေ အခုအထိ အကောင်းချည်း ရှိသေးတာကလား...
ပုံဟောင်းလေးတွေ ပြန်ကြည့်ရတော့လည်း လွန်လေပြီးသော အတိတ်ကို ဦးဟန်ကြည်တို့လည်း ယောရောင်လွမ်းသွားပါသဗျား...
ရွှေအိမ်စည် said on September 14, 2013 at 9:08 PM
သများကတော့ သူ့ကို စာကျက်ပါစေတော့ရယ်လို့ တဂ်ပို့စ်မှာ ထည့်တောင်မတဂ်ပူး
မမဇွန် စာကျက်ပါစေလို့တောင် ရေးထားတာ
သူကတော့ အင်းလေ စာလုပ်နေတာပါ :D
မမဇွန် သေးသေးလေးက ချစ်စရာလေး..စူတူတူလေးနဲ့
မေမေက ချောတယ် :)
ဇွန်မိုးစက် said on September 15, 2013 at 6:23 AM
ညိုလေး... စာလုပ်နေတဲ့ကြားက break ခဏယူတာပါကွယ်။ ;-)
အစ်မချစ်... မျက်လုံးပြူးပြူးနဲ့ ကလေးမလေးလို့ နာမည်တွင်ခဲ့ဖူးတယ်။ :D
ကိုဟန်ကြည်... ဟုတ်တယ်နော်၊ ကာလာနဲ့ပုံတစ်ချို့ဆေးသားတွေပျက်သွားတာ၊ ပြယ်သွားတာတွေရှိပေမယ့် အဖြူအမည်းပုံတွေမှာ သိပ်မရှိခဲ့သလိုဘဲ။ ဆုတောင်းအတွက် ကျေးဇူးပါ။း)
ညီမသူသူ... ဘယ်တုန်းက ဘယ်ပို့စ်အတွက် ထည့်မတဂ်ဘဲ နေလိုက်တာလဲဟင်? ဘလော့ဂ်ဒေးအတွက် မမဇွန် ရေးပြီးပြီလေကွယ်။ စူတူတူနဲ့ဇွန်သေးသေးလးကြီးလာတော့ သူ့အမေချောတာကို မမှီဘူးဆိုပြီး ပြောကြလေသတဲ့ကွယ်။ :D
မြတ်ပန်းနွယ် (Myat Pan Nwe) said on September 15, 2013 at 10:30 AM
မဇွန်မိုးစက် မေမေရဲ့ အလှက ဘိုဆန်ဆန် ချောတာနော်။ အရမ်းလှတာပဲ။
Shinlay said on September 15, 2013 at 11:58 PM
ဇွန့် မေမေ ကို နှုတ်ဆက်ပေးပါ။
ဇွန်မိုးစက် said on September 16, 2013 at 6:44 AM
ကျေးဇူးပါ ညီမ မြတ်ပန်းနွယ်... မေမေ့ဆီမှာ ကပြားသွေး လေးပုံတစ်ပုံပါလို့ ဖြစ်မယ်။း)
ဟုတ်ကဲ့ပါ အစ်မရှင်လေး... ဇွန် နှုတ်ဆက်ပေးမယ်နော်။း)
သက်ဝေ said on September 17, 2013 at 7:14 AM
ညက်မှောက်ကုတ်နေတဲ့ ဇွန်သေးသေးလေးကို ချစ်တယ်...း-)
ညီလင်းသစ် said on September 17, 2013 at 6:29 PM
ဇွန် ပိစိညှောက်တောက်လေးက မျက်မှောင်လေးကုတ်ပြီး အရာရာကို စူးစမ်းတတ်မယ့် ပုံမျိုးပဲ...၊း)
မအေတူသမီးရဲ့ အမှတ်တရပို့စ်မှာ မြင်ရတဲ့ သမီးတူအမေလည်း အေးချမ်း၊ ငြိမ်သက်ခြင်းများနဲ့ မွေးနေ့မင်္ဂလာ ဖြစ်ပါစေလို့ (နောက်ကျနေသော်ငြား) ဆုတောင်းလိုက်ပါတယ်...။
ဇွန်မိုးစက် said on September 17, 2013 at 7:42 PM
ဇွန်အကြီးကြီး ညက်မှောက်ကုတ်နေရင်ရော ချစ်ဦးမှာလား မမသက်ဝေ? :D
နောက်ကျနေပေမယ့်လည်း ဆုတောင်းအတွက် ကျေးဇူးတင်ပါတယ် အစ်ကိုညီလင်းသစ် :)
mstint said on October 5, 2013 at 8:22 AM
တီတင့်လဲ ခင်ပွန်းနဲ့အတူ နေပြည်တော်ကိုရောက်နေလို့ ဘလော့တွေကို ပုံမှန်မ၀င်ဖြစ်ပေမယ့် ရန်ကုန်ကို ၂ ရက် ၃ရက် ပြန်ရောက်တိုင်း လက်လှမ်းမှီသလောက် အသည်းအသန် ၀င်ဖြစ်တယ် ဇွန်ရေ.... တန်ဘိုးရှိတဲ့ Black & White လေးတွေပါ...
ဇွန့်မေမေရဲ့ မွေးနေ့ရက်က တီတင့်ခင်ပွန်းရဲ့ မွေးနေ့ရက်နဲ့အတူတူပဲ သူက 14th Sept မှာ ၅၇နှစ်ပြည့်ခဲ့ပြီ... မွေးနေ့ရှင်များ ကိုယ်စိတ်နှစ်ပါး ကြည်လင်အေးချမ်းကြပါစေလို့...
ဇွန်မိုးစက် said on October 5, 2013 at 8:12 PM
လက်လှမ်းမီ အချိန်ရသလောက် အသည်းအသန်ဝင်ဖတ်ပြီး ဆုတောင်းပေးတဲ့ တီတင့်ကို ကျေးဇူးတွေ အများကြီး တင်ပါတယ်လို့...း)